✅ CycleTrader Trading Indicators -Day Trade eminis ES500 | NQ100 - NinjaTrader 8 Mgbe ị na-eji trading CycleTrader eme ihe bara uru, ọ na-esiri ike ịghara ime ego.
Ndị na-egosi CT
Debanye aha / ngosi
CycleTrader Ahịa ahia ahia
Anyị na-agba ọsọ na NinjaTrader 7 & 8
Ahịa Ahịa - Ndị na-egosi - June 25th
Ezigbo ọrụ Jerome !!! Ihe ọhụrụ CT09 Bare Delta Profaịlụ egosi na-enye anyị nnukwu oghere ịbanye ma wepụ ahịa. Jiri mkpirikiri chaatị dị ogologo iji mee atụmatụ maka azụmahịa dị mma. O nwere uru bara uru ma ọ bụrụ na ị tụkwasịrị obi na mgbakọ na mwepụ !!! Ọhụrụ a na-enye anyị nnukwu njedebe. Mgbe anyị na-ekwu okwu ụnyaahụ, ekwuru m na $ 7,400 n'izu gara aga na ndị okenye CT na $ 312 na ahia ndị ahịa ọhụrụ na-egosi mgbe anyị natara ha ọnụ na $ 2,500 taa. Hụ CT09 ... Nke a bụ ihe akaebe. DAALỤ!!
Ahịa Ahịa - Ndị na-egosi - June 26th
Enwuwo m ọkụ ugboro ole na ole n'ihu na mgbe m kpọtụrụ Jerome banyere ndị na-egosi ya, ajụrụ m ya ihe kpatara ebe a ka mma. Azịza ya na-anwale demo ahụ ma hụ nke mbụ. Emere m nke a na taa m zụtara ha. Enwere m ike ịhụ ebe ọnụahịa ị ga-abanye karịa ka ọ dịbu. Otu CT 09 indicator nyekwara m ụzọ kachasị mma. Daalụ Jerome maka ịmepụta ndị a. Ọ na-agbanwe ụzọ m si azụ ahịa ma ana m eme ego ugbu a. Weta $ 1450 taa na 1 ka nza 4 na ES 500.
Ndị na-egosi ahịa ahịa CycleTrader NT8
CycleTrader Ndabere NT8
Ego / Ụgwọ
Ọnwụnwa 14 Day
San Fransisco Mmetụta
Akwụsịla Ịhapụ N'aka
© Copyright 1988 -2019 Bressert Trading Technology, LLC. - Thu, July 18, 2019
Ahịa Ahịa - egosi
Wow, Great Courses !!! M na-ahụ ya ugbu a, ị dị mma! Ị nwere ike ịbanye na ahịa ka mma ma nwe obi ike banyere ọ bụla ahịa. Enwere m ekele maka igosi m ihe a ......... $ 875 ụbọchị mbu m na-egwu gburugburu na usoro ihe a. Ị nwere ike ịnwe ite ọla edo! DAALỤ!
Ahịa Ahịa - Ndị na-egosi - June 18th, 2019
Hi - M masịrị gị usoro azụmahịa. Emere m dollar $ 1,000 site na ya ụbọchị mbụ na akaụntụ simulator na ninja trader. N'ihi ya azụrụ m ha taa.
... M n'ezie dị ka ndị nyocha !!!
Ndewo Jerome, achoro m agwa gi na ahia site n'igosi olu olu di egwu ...
Nkwupụta ndị ahịa - Systems - June 11th, 2019
Emere m ka mpeepe otu Nzọụkwụ 50K kachasị elu na-ejikọta na 11 ụbọchị. 🙂 na-eji usoro 1003!
Gene - Ahịa ahia
Ahịa Ahịa - Ndị ngosi - May 31st, 2019
Jerome- Nwere ezigbo ụbọchị taa na mbụ m na ndị na-egosi; kpochapụrụ $ 1900 na e-minis. Ọ dị nnọọ ka ịchọta iko m ma tinye ha, nwee ike ịhụ ahịa n'ụzọ doro anya n'ụzọ na-adịghị adị n'ebe ọzọ. - M ga-atụgharia ma mezue m zụrụ ihe na izu ụka-olileanya na ị nwere ezigbo onwe gị.
... M ga-achọ, ma ọ bụ na m ga - azụ ahịa n'enweghị CycleTraderPro, mgbe ọ bụla!
Ahịa ndị ahịa - egosi - June 21st
Na 1 hour na 40 mins m elu $ 1,000 na-emepụta ihe ngosi 1 na-azụkarị nkwekọrịta 1 na 2 mgbe ọ dị mkpa. Naanị ịkọ ihe ị gosiri m ... ọ bụ n'ezie ihe kachasị nchegbu m na-azụ ahịa.
Ekwetaghị m na ọ bụrụ na onye ọ bụla ọzọ nọ n'ebe ahụ na-egosi olu dị ka ihe na-egosi ụzọ ị si eme. Ma nke ahụ bụ tiketi ọlaedo ahụ ịhụ ụdị ahụ! Ọrụ dị egwu!
Ana m echere ugbu a ka m weere ahịa ahụ ruo mgbe m ga-ahụ VMIa Mpịakọta na-aga n'otu ntụziaka dị ka ọnụahịa index na BOOM! CHAỊ!
Ahịa Ahịa - Ndị na-egosi - June 20th, 2019
M hụrụ VMI n'anya na akara akwụkwọ ndụ akwụkwọ na nọmba ọnụọgụ. Ezigbo ọrụ Jerome. Daalụ
Joe V - NQ ahia ahia
Achọpụtara m onwe m mgbe m chọtara CycleTRADER Systems. ihe dị ịtụnanya. Euro mere $ 6335, ma ọzọ $ 3800 ... I meela Jerome ukwu, ị mere ọrụ akụkọ ihe mere eme iji mepụta usoro ndị a maka anyị.
Bart D - Onye ahia ahia Germany
Enwere m mmasị na ndị na-egosi mgbe nyocha ọzọ - M zụtara ha! Ọ bụ kpọmkwem otú m si achọ ịzụ ahịa. Ọ dịka enyemaka bara uru n'ezie iji jiri na-ere ahịa oge. Ị nwere nnukwu ngwaahịa maka nzube m. Ekwenyere m n'ụzọ doro anya na ebe ị nọ n'ọnọdụ iji nweta ahịa.
Jerome - CT 34 Nkwado / Ndogide Windows na CT 09 Bar Volume Delta abụghị ihe efu.
Ọ dị nzuzu na m na-eme ihe na-abụghị nke m ga-eme mgbe ọ na-abịa n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, ya bụ, ree na-acha uhie uhie. Ugbu a, m ga-esi na windo ma chọọ ịzụta na-acha uhie uhie ma na-ere mgbe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'ihi na ọ bụ otú ahụ ka ọ na-arụ ọrụ ma enwere m ike ịhụ ya site na ndị na-egosi ahịa Cycle.
Ka o sina dị, egwuregwu ọzọ na-agbanwe m. Na-egbu ya ụbọchị abụọ gara aga na naanị 15 min delta mmanya chaatị
Ahịa Ahịa - Ndị na-egosi - June 19th, 2019
Jerome, - Okwu apụghị ịkọwa ọrụ nke Cyber ​​Trader. Naanị ị na-azụ ndị ahịa ọtụtụ ngwá agha ndị zuru ezu ka ha nwee ike ịbanye na ahịa n'ụbọchị na ụbọchị ... .complete nkwupụta okwu. Na ọtụtụ mmelite na nwelite nke meziwanye na ngwanrọ pụrụ iche na nke bara uru ị na-akwụsị ịkwụsị m. Ị bụ ezi onye na-ese ụkpụrụ ụlọ, onye ahịa azụ ahịa.
Na-emegharị mgbe nile maka ahịa na-agbanwe agbanwe ruo mgbe ebighi ebi, ma na-agbaso ụkpụrụ dị mkpa. Imelite ohuru na nsoro ohuru delta na TRUE nkwado / windo na-akwado / windo dị ka ihe ọ bụla m hụla tupu. Ị mara mgbe ị ga-ele anya ịzụta na ịzụta na-enweghị nrịanrịa nke nyocha. Nke a siri ike ịbịa site n'ahịa taa. Ebumnobi zuru ezu.
Ọtụtụ ga-erite uru na ngwanro gị. Enwere m obere trader (2-3 contracts) na obere ya na anaghị m ezute 1K kwa ụbọchị iji tinye ngwanrọ gị. Ọ dị ka inwe iko Xray ma ị nwere ike ịtụ anya ka ọka wit ga-eme. Naanị "na-agbaso mgbakọ na mwepụ" dị ka ị na-ekwu. Enweghị ike ịghọkwu eziokwu.
Ọnụ ọgụgụ adịghị ụgha!
Robert - Cyber ​​Trader Day Trader.
Hypothetical arụmọrụ pụta nwere ọtụtụ pụta ụwa na-agaghị emeli, ụfọdụ nke na-kọwara n'okpuru ebe a. Ọ dịghị yiri na-eme ka ahụ ọ bụla na akaụntụ ma ọ bụ yiri iji nweta uru ma ọ bụ na-efunari yiri Iji ndị ahụ e gosiri; N'eziokwu, e nwere ọtụtụ ugboro nkọ iche N'agbata hypothetical arụmọrụ pụta na-arụpụta n'ezie gasịrị na-enweta site ọ bụla trading usoro.
Otu nke-emeli nke hypothetical arụmọrụ pụta bụ na ha na-N'ozuzu kwadebere na abamuru nke ịsị. Ke adianade do, hypothetical trading anaghị agụnye ego n'ihe ize ndụ, ma ọ dighi hypothetical trading ndekọ ike kpamkpam na akaụntụ maka mmetụta Of ego n'ihe ize ndụ nke kpọmkwem trading. Dị ka ihe atụ, ikike Iguzogide Nsogbu tụfuru ma ọ bụ na-ekwenye a akpan akpan trading omume n'Agbanyeghị trading tụfuru bụ ihe onwunwe ihe nke nwekwara ike imetụta n'ezie trading pụta.
E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ njikọ na ahịa n'ozuzu ma ọ bụ na mmejuputa ọ bụla Specific trading omume nke na a pụghị ime gua na Nkwadebe nke hypothetical arụmọrụ pụta na niile nke pụrụ imetụta erekwa ihe Egwu ngosi: Futures na Forex trading nwere ọkpụrụkpụ n'ihe ize ndụ ma na ọ bụghị nke ọ bụla na ọṅụ. Ihe ọṅụ nwere ike nwere ike ida niile ma ọ bụ karịa na mbụ ego. Egwu isi obodo bụ ego na ike ga-efu enweghị jeopardizing ndị ego ma ọ ndụ style. Naanị ihe ize ndụ isi obodo ga-eji maka trading na naanị ndị na-ezu ihe ize ndụ isi obodo kwesịrị ịtụle trading. Gara aga arụmọrụ idịghe indicative nke ga-eme n'ọdịnihu na-arụpụta. Ngosi: ego na ala na commodities agụnye ọkpụrụkpụ dị ize ndụ ma na-ekwesịghị na-eme n'aghọtaghị niile ize ndụ metụtara ire na zuo nke ala.
The cycletrader, profittrader software kọwara n'isiokwu a e mere na-a ngwá ọrụ iji nyere aka investors ke ukeme mkpebi. Ị nwere naanị ọrụ maka eleru na-ekpebi mgbe na ihe okwu ime ihe ọ bụla azụmahịa, na nke na-ekpebi ma ò kwesịrị ekwesị gị nhọrọ.
Site etinye na ala ma ọ bụ commodities, ị nwere ike ida gị ego gị niile ego. Gara aga arụmọrụ anaghị ekwe nkwa ido n'ọdịnihu pụta. Ọ bụla trading usoro kọwara na a na saịtị nwere ike n'ezie anaghị eme gị ego ọ bụla na gị mkpa ịghọta n'ihe ize ndụ e depụtara n'elu.
A chọrọ ka anyị gosipụta nke a - Ngosipụta a bụ maka ebumnuche naanị na echiche ndị e gosipụtara bụ nke onye na-enye ya naanị. A ghaghị ilebara ndị ahịa niile anya dị ka ihe atụ ma ghara ịtụ anya na a ga-emegharị ha na akaụntụ ahịa azụ.
Akaebe nke na-apụta na weebụsaịtị a nwere ike ọ gaghị abụ onye nnọchiteanya nke ndị ahịa ndị ọzọ ma ọ bụ ndị ahịa ma ọ bụghị nkwenye nke ịrụ ọrụ n'ọdịnihu ma ọ bụ ihe ịga nke ọma.